LibreOffice 3.5.3 ayaa diyaar u ah soo dejinta | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa loo heli karaa soo dejinta LibreOffice 3.5.3
Waxaa sii daayay Aasaaska Dukumintiga la 3.5.3 version de LibreOffice, sii deynta sii kordheysa xasiloonida iyo waxqabadka tan aadka u fiican Xafiiska Suite.
Liiska isbeddelka (heerka aasaasiga ah) waad ka dhex arki kartaa xidhiidhkan iyo kan kale. Maqaalka waxay ku sheegeen in 10 ka mid ah horumariyeyaashu ay yihiin arday Xagaaga Google ee XXXX waxayna ka shaqeyn doonaan hagaajinta soo socota:
Waxqabadka hagaajinta Calc;
Tifaftirka waraaqaha wadajirka ah iyadoo la adeegsanayo Telepathy;
Sifeeyaha Microsoft Publisher filter;
Saxeexyada dhoofinta PDF;
Xakamaynta fog ee casriga ah;
Xiriiriyaha adeegsadaha cusub ee xulashada sheybaarada;
Isku-xirka adeegsadaha garaafyada Java-ku-saleysan ee muuqaalka Android;
Ku hagaaji muuqaalka shaandhada dhoofinta SVG;
Qalabka tijaabooyin badan oo ka wanaagsan.
Noocaan cusub ayaa laga soo dejisan karaa xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa loo heli karaa soo dejinta LibreOffice 3.5.3
War weyn. LibreOffice waa qol weyn oo xafiis ah oo ugu fiican dhamaantiis, kuma nasaneyso waxqabadkeeda. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inaan ku arko mustaqbalka aan fogeyn waa dib u qaabeyn yar oo ka mid ah isdhexgalka, kaas oo da 'ahaan sii yaraanaya.
Waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay, LO waxay ku kasbatay xasillooni, waxaan u maleynayaa in tallaabada xigta ay tahay isdhexgalka
Waxaan sidoo kale doonayaa inaan hagaajiyo interface-ka xoogaa
Sidee ayuu kontaroolada fog ee casriga ah u yahay? Wixii android ah miyaan ka soo dejiyaa google play? Haddii kale waa suite aad u fiican laakiin waa inay hagaajiyaan isdhexgalka xoogaa, taas oo ka socota 90s haddii kale hambalyo
Ku jawaab Temu_cl
Waoo, Wakiilada Isticmaalayaasha qof walba waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican !! ^^
Oo muxuu qofna uhadli (adeegsadaa?) OpenOffice dambe ???
Tan iyo markii ay Oracle heshay Sun, iyo iyada, mashruuca OpenOffice, waxay lumisay xiisaha ay uqabeen dad badan oo adeegsadayaasha ah, gaar ahaan tallaabooyinka anti-Linux-ka ee shirkadani qaadatay.
Sababtoo ah OpenOffice wuxuu qoday qabrigiisa, inkasta oo uu ka mid ahaa SUN. In kastoo Oracle ugu deeqay mashruuca Apache (hadaanan qaldamin) ya LibreOffice horey ujiray ilaa iyo hada lama joojin karo. LibreOffice waa la hagaajiyay, wuxuu leeyahay horumar firfircoon mana laha shirkad kasta, wax yar, mid ka mid ah Pro-Daaqadaha.
Sidee wanaagsan 🙂 imisa ayaa naqshadeynta sameynaya? Way fiicantahay in la arko mid hagaajinaya iswaafajinta Calc.
ArchBang Linux 2012.05 ayaa la sii daayay
[ESP] Ubunchu Cap2: Cli oo wata Gnomes!